सुहाग-रातमा बेहुलीको महिना-वारी सुरु भयो! श्रीमान् को चाहना पूरा नगर्दा के गरे यस्तो? « गोर्खाली खबर डटकम
महिला अधिकारका कुरा गर्दा धेरै देशहरु अझै पछि नै छन् । यस्तै एक समाचार इजिप्टको छ, जहाँ एक महिलाको कथा सुन्दा जिउ काँ प्छ ।
त्यहाँ एक पुरुषले बिहे गरे । तर जब सुहाग-रातको समय भयो, दुलहीको महिना-वारी सुरु भयो । त्यसपछि उनी सह-वासका लागि राजि भइनन् । रिसाएका उनका पतिले उनलाई कु ट पी ट गरे र क र णी गरे । यसले नयाँ दुलहीको मनो भावनामा गहिरो चोट पुग्यो ।
हालै इजिप्टमा एक टिभी कार्यक्रममा देखाइएको यस्तै एक दृश्य पछि धेरै महिलाहरूले उनीहरूसँग भएका आफ्ना नराम्रो अनुभवहरू सोशल मिडियामा साझा गरिरहेका छन् ।
ती पोष्टहरू मध्ये एउटी महिलाले भनिन् कि उनका लोग्ने धेरै अद्भुत व्यक्ति थिए तर जब उनी गर्भ-वती भइन् उनले नराम्रो व्यवहार गरे जसको कारण उनको जीवन पूर्णरूपमा परिवर्तन भयो ।
उसको पोष्टमा यो लेखिएको थियो कि ‘पतिको ब्य त्त्वि त राम्रो थियो । जब हामी विवाह गरेको एक बर्ष भयो, त्यस समयमा म गर्भ-वती भएँ र म डेलि-भर गर्न लागेकी थिएँ ।
यति बेला मेरा पतिले मलाई स जा य दिने निर्णय गरे । उनले स जा य स्वरुप मलाई कु ट पी ट गरे अनि ममाथि क र णी गरे । यसले गर्दा मेरो गर्भ-पात भयो । लामो कानुनी झ न् झ ट पछि मेरो पतिसँग स म्ब न्ध-वि च्छे द भयो र उहाँबाट अलग भएँ तर अहिले पनि मेरो बच्चा गु मा उ ने पी डा मेरो दिमागमा छ ।
भरतपुर अस्पतालमा आठ कोरोना सङ्क्रमित गर्भवतीको सुरक्षित प्रसूति